Ukubuyekezwa kweSonos Roam: umsindo wekhwalithi, ophathekayo futhi ohlakaniphile | Izindaba ze-IPhone
Ukubuyekezwa kweSonos Roam: umsindo wekhwalithi, ophathekayo futhi ohlakaniphile
ULuis Padilla | 06/04/2021 15:00 | Izesekeli ze-IPhone, eziningana
Isipikha esiphathekayo kufanele sibe sincane ngokwanele ukuthi ungasihambisa noma yikuphi, kepha ngaphandle kokuyekethisa ngekhwalithi ezwakalayo yomsindo. ISonos ayizuzanga nje lokhu ngeSonos Roam yayo entsha, kodwa futhi isinikeza izici eziningi ezengeziwe ezikubeka phambili komncintiswano.
1 Idizayini nokucaciswa
2 Lalela umculo ngendlela ofuna ngayo futhi lapho ufuna khona
3 Ukuhlanganiswa ne-Sonos ecosystem
4 Ikhwalithi yomsindo
Ngokuqamba nje igama lomkhiqizo weSonos sesivele singathola umbono wokuthi ukwakheka kwanoma imuphi umkhiqizo owusungulayo uzoba njani: ubuncane, ubumnene, ubuhle futhi, ngaphezu kwakho konke, kuqedwe ngokuphelele. Yile ndlela kanye eyiSonos Roam entsha, yona enobukhulu bayo obungu-168x62x60mm, nesisindo esingu-430gr kuphela, efanelekile ukuyithatha noma ikuphi ngaphandle kokuyibona. Itholakala ngemibala emibili: omnyama nomhlophe.
Singaba nokuzola okukhulu lapho sikubeka noma yikuphi, ngoba isitifiketi sayo se-IP67 siyenza imelane nothuli namanzi, kepha hhayi ukuqhuma kwamanzi, ngisho nokuhambisa okungenzeka (1 imitha imizuzu engama-30). Ungakhathazeki ngokukubeka onqenqemeni lwechibi, ngoba uma othile ngephutha eliphonsa emanzini, kufanele nje uzihluphe ngokulicosha bese ulikhipha.
Inebhethri elakhelwe ngaphakathi elikunika amahora afinyelela kwali-10 wokudlala okuqhubekayo, nezinsuku ezifika kwezili-10 zesikhathi sokulinda. Ukushaja kabusha ibhethri kungenziwa kusetshenziswa ikhebula le-USB-C eliza ebhokisini, noma ngokwenza ukusetshenziswa kwanoma iyiphi ishaja ye-Qi ejwayelekile onayo ekhaya, induduzo yangempela manje ukuthi sonke sesinokukodwa kwalokhu cishe kuwo wonke amagumbi. USonos uthengisa ishaja kazibuthe ongayikhetha ehlukile.
Inokuxhumana I-WiFi (i-dual band) ne-Bluetooth, futhi uma selumisiwe isipikha sizoshintsha sisuke kokunye ukuxhumana siye kwesinye ngokuya ngokutholakala. Shiya ikhaya futhi lizoshintshela kuxhumano lwe-Bluetooth ngokuzenzekelayo, lize ekhaya futhi lizoxhuma ku-WiFi futhi ngaphandle kokuthi wenze noma yini. Ihambisana futhi ne-AirPlay 2, ngakho-ke ungayisebenzisa njengesinye isipikha nge-HomePod yakho noma esinye isipikha seSonos, noma ehambisana nephrothokholi ye-Apple.
Lalela umculo ngendlela ofuna ngayo futhi lapho ufuna khona
Amathuba ahlinzekwa yiSonos ahlala emakhulu kakhulu lapho unquma ukuthi ufuna ukuwulalela kanjani umculo. Ingabe usebenzisa iSpotify? I-Apple Music? Umculo we-Amazon? Akunandaba noma ngabe iyiphi insizakalo yomculo obhalise kuyo, ungayingeza kuhlelo lokusebenza lwe-Sonos (isixhumanisi sokulanda). Ungangeza ama-akhawunti amaningi uphinde uhlanganise uhlu lomculo, ukuze ulawule konke kusuka kuhlelo lokusebenza lweSonos uqobo. Uma ufuna ukusebenzisa uhlelo oluthile lwensizakalo, ungakwenza futhi, ngokudlulisa umculo ngokuxhumeka kwe-Bluetooth noma nge-AirPlay.
Futhi uma okufunayo ukukhohlwa nge-iPhone yakho bese usebenzisa isipikha ngqo, Ungayenza futhi ngoba iyahambisana ne-Alexa ne-Google Assistant, ukuze ubuze ngezwi ukuthi yimuphi umculo ofuna ukuwulalela, noma i-podcast yakamuva yohlelo lwakho oluthandayo. Vele unazo zonke izinketho ezinikezwa ngabasizi ababonakalayo: isilawuli esizisebenzelayo sasekhaya, izindaba, isimo sezulu ... Isipikha esihlakaniphile ongasithatha noma kuphi.
Ukuhlanganiswa ne-Sonos ecosystem
Esinye sezici ezihlukile kakhulu zeSonos uhlelo lwayo lwemvelo. Izipikha zayo zakha inethiwekhi ongayikhulisa kancane kancane, enamamodeli ahlukahlukene, asebenzisana kahle, enza imishini yaseshashalazini ebabazekayo, izipikha eziningi ezizwakala zivumelanisiwe ngokuphelele kuzo zonke izindawo zasekhaya, njll. Lapho usufake isipikha kunethiwekhi yakho iSonos ihlangana ngokuzenzakalela kuso futhi ikuvumela ukuthi usihlanganise nezinye izipikha. Ngaphezu kwalokho, le Sonos Roam entsha yethula umsebenzi omusha.
Uma ulalele umculo ku-Sonos Roam yakho bese ungena egumbini lokuphumula, lapho une-Sonos Arc yakho, sondeza isipikha esincane kuleso esikhulu, cindezela inkinobho Play bese umsindo obewulalele kuRoam uzoya e-Arc ngomzuzwana. Ukusebenza kungenzeka futhi ngokuphambene nalokho, kusuka e-Arc kuya kuRoam, ukuze uhlale uqhubeka nokulalela umculo wakho noma i-podcast ngaphandle kokuhamba kumamenyu wefoni.
ISonos Roam entsha iyisipikha esincane kunazo zonke okwake kwasungulwa lo mkhiqizo, kepha ayiyekethisi ngekhwalithi yomsindo okuwuphawu lwendlu.. Ukulinganiselwa okubekwa yisikhulisa-zwi ngenxa yobukhulu baso kuncishisiwe kwaba sezingeni eliphezulu, futhi lesi sipikha esincane esiphathekayo sisinikeza ikhwalithi yomsindo ezingeni elifanayo nezinye izipikha ezinkulu. ISonos Roam isinikeza umsindo onamandla, ongagcwalisa ngokuphelele igumbi noma usethe iphathi ngaphandle.
Zonke izici zomsindo zilinganisiwe kakhulu, zinamabhasi anamandla angafihli ama-mids noma ama-highs, kepha uma ukhetha ezinye izinhlobo zomsindo, ukulingana kwenziwa ngezifiso ngakho-ke kufanele ulungise izilungiselelo ozithanda kakhulu. Ngaphezu kwalokho uSonos ufake i-TrueTone ezenzakalelayo, elungisa umsindo uye lapho uwubeke khona, ukuze uhlale ukukunikeza ikhwalithi engcono kakhulu.
Izipikha eziphathekayo ngokuvamile zikhawulelwe kakhulu ngokwamandla noma ngekhwalithi yomsindo. Kodwa-ke, iSonos izuze ngeRoam yayo isikhulumi esilinganiselwe kakhulu ngomsindo, onamandla, nangayo yonke imisebenzi izikhulumi ezinkulu ezinayo, ngaphezu kokuxhuma kweBluetooth neWiFi, kanye nohlelo olwenza umehluko nokunye. Izotholakala kusuka ngo-Ephreli 20 kuwebhusayithi yeSonos nakwezinye izitolo ngentengo ye- € 179, ngaphezulu kokufanele konke okusinikeza kona.
Kuthunyelwe ku: 6 Apreli 2021
Ukulungiswa kokugcina: 6 Apreli 2021
Idizayini ebushelelezi neqondayo
Ukumelana nothuli nokumelana namanzi
Ihlanganiswe ne-Sonos ecosystem
Qedela futhi enembile application
Akubandakanyi ishaja ebhokisini
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Izesekeli ze-IPhone » Ukubuyekezwa kweSonos Roam: umsindo wekhwalithi, ophathekayo futhi ohlakaniphile
Sawubona, nginentshisekelo yokwazi ukuthi kungenzeka yini ukuthi ushintshe ibhethri lakho njengomfowenu omdala
Thola lapha uma ungomunye walabo abathintekayo ku-Facebook hack
UTim Cook ngeke esaba eminye iminyaka eyishumi ku-Apple